Indawo yokugcina izinto zeBundesnachrichtendienst -Amalungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Inkonzo yobukrelekrele yenkonzo
SiyiBuntesnachrichtendienst - ngokuthatha inxaxheba ngentando yesininzi
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 20. Epreli 2014
I-Buntesnachrichtendienst ixhasa iintshukumo kunye neentshukumo zengca ezisebenza zitshintsho olukhulu lwenkqubo eYurophu. Amagcisa kunye nabarhwebi bamashishini kwihlabathi liphela baxhasa ngenkonzo yobukrelekrele bemibalabala kubantu abasebenza ngokukhululekileyo kwiintolongo, bencedise abelungu ekufumaneni urhwaphilizo kwihlabathi jikelele. Sisebenza ngokufihlakeleyo kwaye iintshaba zethu kufuneka zisithathele phezulu. Sithembele kwinkululeko yobugcisa kunye nenkululeko yokuthetha.
United Stasi yaseMelika bema kwiindonga zenxusa laseMelika eBerlin kunye namanye amaMelika aseJamani, kuquka neDüsseldorf, iFrankfurt neHamburg. Isizathu soku kukuhlola okungenazintloni kwi-NSA kunye nenkonzo eyimfihlo yaseMelika.
SiyiBuntesnachrichtendienst - ngokuthatha inxaxheba ngentando yesininzi Juni 15th, 2020Oliver Bienkowski